Home EUROPEAN FOOTBALL STORIES Aaron Connolly Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha "Na whizzkid“. Nwa anyi bu Aaron Connolly Child Plus Akuko Untold Biography Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe ndi a ma ama site na mgbe obu nwata rue oge.
Ndụ na nkwalite nke Erọn Connolly. Ebe E Si Nweta Foto: Telegraph, Independent Na Twitter
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ nwata ahụ dị egwu nke wedatara Spurs na Premier League mbụ mmalite nke oge 2019 / 2020. Agbanyeghị, naanị ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Aaron Connolly nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya zuru oke bụ Aaron Anthony Connolly. A mụrụ Aaron Connolly n'ụbọchị 21st nke Jenụwarị 2000 na nne ya, Karen Connolly na nna, Mike Connolly na Oranmore, obodo dị na Republic of Ireland. Connolly bụ nwa mbụ nne na nna ya bụ ndị Irish mara mma nke e sere n'okpuru.
Zute Aaron Connolly nne na nna Karen na Mike. Ebe E Si Nweta Foto: Independent
Aaron Connolly sitere na ezinụlọ ya si Oranmore, obodo dị na County Galway, ọdịda anyanwụ nke Ireland. A na-akpọkarị ebe o siri bịa dị ka Cultural Heart of Ireland, bụ ebe amaara ebe obibi ndụ ya na ọtụtụ ememme.
Ọmarịcha nlele nke Oranmore na Galway County, Ireland- ebe Aaron Connolly si. Ebe e si nweta ya Irelandbeforeyoudie
Aaron Connolly zụlitere n'ezinụlọ ndị ọgaranya. Ndị mụrụ ya dị ka ọtụtụ ndị rụrụ ọrụ Irish mana mana ha anaghị enwe ego maka ịhazi ezinụlọ. Dabere na akụkọ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, Aaron Connolly toro n'akụkụ nwanne ya nwoke aha ya bụ Ethan Connolly bụ onye dị ka ya, ghọkwara onye egwuregwu.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ndi nne na nna nke Aaron Connolly choro ka nwa ha nwoke buru onye oka akwukwo n’enweghi echiche o gha eme ya n’egwuregwu. Laa azụ n'oge ahụ, Connolly na-aga ọrụ agụmakwụkwọ ya na Nationallọ Akwụkwọ National Brierhill nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Galway. Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, o nwere anya dị mma na mpaghara bọlbụ dị n'akụkụ ụlọ akwụkwọ nke ọ na-agbakarị bọl mgbe emechara ya na klas.
Onye bụbu onye nkuzi nke ụlọ akwụkwọ mba Brierhill nke na-akpọ aha Conor Hogan na-echeta otu nwa agbọghọ Aaron Connolly dị ka obere nwa nke ga-eyi uwe egwuregwu bọlbụ na-efegharị ebe ahụ ma na-agba bọl bọl, n'agbanyeghị ọnọdụ ihu igwe.
Oge mbido Aaron Connolly na ụlọ akwụkwọ mba Brierhill. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
"Abụ m onye nkuchi dochie anya ebe ahụ ọnwa isii ma echetakwara m na klas ya nwere ụmụ nwoke 30 na Aaron Connolly so na ụmụ nwoke ole na ole bụ ndị na-agba oke egwuregwu." Conor Hogan, onye bụbu onye nkuzi Aaron na-echeta.
Dị ka onye na-eto eto na-efe efe, Aaron Connolly mụtara azụmaahịa football ya dị ka onye siri ike, nke nwere ike ịga n'ihu. N'oge ụfọdụ, ọ mere ndị mụrụ ya obi abụọ adịghị ya na Erọn na-aga n’ụzọ ziri ezi. Na mmechi, mpako nke ndi ezinulo ya nke Aaron Connolly na ndi nkuzi ulo akwukwo amaghi oke obula mgbe akporo ya ka o bia ikpe na Mervue United.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Ndụ Ndụ Mmalite
N'afọ 2011, Aaron Connolly kwagara na ụlọ akwụkwọ ọta akara Galway nke Mervue United ebe a nabatara ya n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ mgbe ọ gafesịrị ule ha na agba efe. N'ịghọta agụụ nwa ha nwoke nwere ịgba bọl maka ndụ, ndị nne na nna Connolly mere ike ha niile iji kwado ọchịchọ ya.
Aaron Connolly Ndụ Ọrụ Nlekọta. Ebe E Si Nweta na Twitter
O teghị aka Aaron Connolly imeghari ma bido ime ka mmuta ya na ulo mmuta ma nwetakwa ugwu egwuregwu mbu ya (lee n’elu). Ọ gbagoro otu a ngwa ngwa ma kpọọ ya ka ọ soro n'ọtụtụ asọmpi egwuregwu.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Akpanwu akwukwo akuko
Akụkọ ihe ịga nke ọma mbụ Aaron Connolly bịara na asọmpi mgbe ọ kụrụ 18 oge dị ka 15 dị afọ. Ihe a whizkid rụpụtara mere ka ọ na-enyere ndị otu ya aka ị nweta otu mpaghara mpaghara nke tụmadiri nne na nna ya.
Aaron Connolly Okporo tozọ Akụkọ Mere Eme. Ebe e si nweta ya Independent
N'ihi ihe ịga nke ọma ya, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ kachasị mma na parish Castlegar, Galway, Ireland. Nke a nwekwara ohere inweta ya site na ọgbakọ bọọlụ kachasị elu n'etiti onye Brighton nọ.
N’afọ 2016, Aaron Connolly mere mkpebi ahụ gaa n’ihu n’egwuregwu bọọlụ ya n’ala ọzọ. Nke a bụ oge o mere a gafere Oké Osimiri Irish, soro Brighton & Hove Albion bụ onye kpọrọ ya oku maka nnwale mgbe ọ rụsịrị ọrụ ya. Ọ na-adọrọ mmasị zuru ezu n'oge ọnwụnwa ya na klọb iji nye ya ohere agụmakwụkwọ afọ abụọ. N'afọ ahụ 2016, a kpọkwara ya ka ọ nọchite anya Ireland U17 ya ma sonye na Irish School FA Cup nke ọ meriri.
Aaron Connolly mgbe ọ nwesịrị mmeri n'asọmpi Iko FA nke Irish. Ebe E Si Nweta Foto TheArgus
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Na-ewu ewu Akụkọ
Aaron Connolly toro site na ike rue ike maka ma ọgbakọ ma obodo. Na 2017, ọ ghọrọ onye na-ebute ụzọ n'ihe mgbaru ọsọ na ntozu maka asọmpi 2017 UEFA European Under-17 Championship, na-asọpụrụ ihe mgbaru ọsọ asaa na egwuregwu isii.
Ihe omume a mere ka ejiri ngwa ngwa soro ya na Brighton & Hove Albion n'okpuru-akụkụ 23 ebe o mere ka mpụta izizi ya dị naanị afọ iri na asaa. Ị maara?… Akụkụ Under-23 ghọrọ ihe ịga nke ọma nye ya dịka ọ dị onye ọkpụkpọ aha nke afọ a na 2018 / 2019 Premier League n'okpuru-23 setịpụrụ, ebe ọ meriri ugboro 11.
Aaron Connolly- Onye Premier League2 2018-2019 Egwuregwu nke Onyinye Egwuregwu Oge. Ebe E Si Nweta: Twitter
Inweta nnukwu onyinye a dọtara uche onye isi otu otu Graham Potter bụ onye mere ka ọ laghachite Brighton mgbe mgbazinye ego sitere n'aka Luton Town.
Aaron Connolly diri ntuli aka nke meteoric rue onye ama ama na 5th ụbọchị nke October na egwuregwu megide Tottenham ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ Premier League mbụ ya, gboo ugboro abụọ n'ụlọ mmeri nke 3 – 0. N'okpuru bụ mpempe vidiyo vidiyo. Ebe E Si Nweta ka SpursTV.
Ị maara?… Ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ mere Connolly 100th Irishman iji gosipụta ihe mgbaru ọsọ Premier League na nwa agbọghọ mbụ mere akara maka Brighton na ọkwa Premier League.
Aaron Connolly na-eme ememme ya ama ama megide Spurs. Ebe E Si Nweta: Independent
Obi abụọ adịghị ya, ihe ịtụnanya nwatakiri ahụ merela ka ndị na - ahụ n'anya bọọlụ mata na usoro mmepụta nke Ireland maka n'ihu Ọ B YGH DR Ọ B DRR!!. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Ndụ mmekọrịta
N'azụ nwoke ọ bụla na-aga nke ọma, enwere otu nwanyị. Maka onye na-agba ụkwụ dị ka Connolly, WAG nwere ọmarịcha ihe ọhụụ ... nke na-ekwu maka enyi nwanyị ya mara mma nke na-aga aha Lucinda Strafford. Dị ka ekpughere ya na akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta ya, ndị hụrụ ya n'anya malitere ịlụ na Jenụwarị 2019.
Nwa agbọghọ mara mma nke Aaron Connolly- Lucinda Strafford. Ebe e si nweta Instagram
O doro anya na Lucinda Strafford bụ brunette mara mma nke na-eme ka ntụkwasị obi ya dabere na ọnyà ọ bụla. Ọ bụ onye anaghị achọ ọdịmma onwe ya, nke anaghị eme ihe ọ bụla karịa inye nkwado nke nwoke maka nwoke ya ọ pụtaghị itinye ndụ ya jide.
Aaron Connolly nwere ezigbo enyi nwanyị na-akwado ya. Ekele diri IG
Otu n'ime ụzọ dị mma ga-esi nweta di na nwunye maka ọkọchị bụ agwaetiti Spanish Tenerife na mmiri nke Ibiza. Dị ka a hụrụ n'okpuru, Lucinda nwere mmetụta dị ukwuu na Aaron Connolly, onye ọ na-akpọkarị dị ka “onye isi ya".
Aaron Connolly na-enwe obi ụtọ n'ụgbọ mmiri ya na ndị enyi ya nwanyị- Lucinda Strafford
Ma Aaron Connolly na enyi ya nwanyị Lucinda na-achọ ịbụ otu n'ime ndị lụrụ di na nwunye Brighton & Hove Albion Football Club. Eziokwu ahụ bụ́ na ha abụọ ebidola idina nwa oge na-eme ka o doo anya na agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ nzọụkwụ ọzọ.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Ndụ nke Onye
Tomata eziokwu banyere Aaron Connolly Personal Life site na ịhụ ya ka ọ na-eme ihe na ama ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ.
Aaron Connolly Eziokwu Ndụ. Ebe E Si Nweta: Twitter
Na-ekpe ikpe site na foto dị n’elu, ị ga-amata Aaron Connolly bụ onye gbara ọkpụrụkpụ ma nwee ume na-ahụ n'anya ịnwe obi ụtọ n’ihe ọ nwetara. Ọ na-ahụ na ọ dị mfe imeghari ike nke gbara ya gburugburu ma na-eji uche ya mgbe ọ bụla.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Ndụ Ezinụlọ
Aaron Connolly nwere obi ụtọ ịpụ ụzọ nke ezinụlọ ya maka nnwere onwe ego site na ịgba bọl. Site n'oge ọ bụ nwata, ndị mụrụ ya rụpụtara ọrụ dị ka ọ na-adị mgbe ọ bụla iji hụ ka ọ na-egwu egwuregwu niile.
Aaron Connolly ya na nne na nna ya na-akwado ya mgbe ha nwesịrị mmeri.
Ma Mike na Karen jidere njem ụgbọ elu iji hụ nke mbụ Premier League nwa ya nwoke na ihe mgbaru ọsọ abụọ mbụ. Dika Connolly mere ihe, nna ya di nganga mara na nwa ya emechaala mezuo nrọ ya.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography si ebi ndụ
Tomata otú ndụ Connolly si bie etu o si etinye ego ya ga-enyere gị aka ịmatakwu onye ọ bụ.
Offmalite, ikpebi ihe bara uru na ihe ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka nwa Whiz. Inweta ego na football bụ naanị ihe ọjọọ dị mkpa mana itinye ya na enyi nwanyị ya bụ Lucinda Strafford ka ha na-eleta ọmụmaatụ ebe mara mma; ( Jamaica, St Lucia, Mauritius, Ibiza, Antigua na Las Vegas) dị ka ya, ụdị ndụ dị mma.
Aaron Connolly Eziokwu Ndụ. Ekele diri IG
Conzọ ndu Aaron Connolly abughi ihe egwu dika mmadu gha ewere n’uche mgbe ilere anya na foto di n’elu. O dikwa ka o nwere nnabata siri ike banyere idebe ego ya na ihazi ya ahazi. Dị ka n'oge edere, enweghị akara nke Connolly showcasing flashy / ugbo ala, ụlọ, wristwatch dị oke ọnụ.
Aaron Connolly Akụkọ Nwatakịrị Akụkọ Gbasara Ntanetị Biography Eziokwu efu
Lezọ Ndụ Ya: Dịka ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ Irish, Connolly na-agbaso akụkọ akụkọ ọdịnala Irish, Robbie Keane onye e jiri ya tụnyere. Ọ kwụghachi ya site n'ịghọ onye ntorobịa mbụ nke Irish (kemgbe Robbie Keane na 1999) iji nweta ihe emem nkwado n'asụsụ Bekee. N'okpuru ebe a, usoro ụfọdụ nke mgbaru ọsọ ya bụ nke atụnyere Legendary Robbie Keane. Ebe e si nweta VTSports
Ọ chere na ọkpụkpọ oku ya nke Ireland bụ prank: Naanị otu izu ka o nwesịrị nkwado ya megide Spurs nke mere ka ọ nweta nwoke nke egwuregwu egwuregwu ahụ, Aaron Connolly, Mgbe e mechara n'ụbọchị ahụ, a kpọrọ oku site n'aka onye isi ndị isi Ireland Mick McCarthy maka asọmpi Euro 2020 nke mba ha na-abịanụ megide Georgia na Switzerland. O chere na ọ bụ prank mgbe agwachara ya banyere ozi ọma. Ndị ọzọ, dị ka ọ hụrụ, ghọrọ akụkọ ihe mere eme.
Aaron Connolly na onye isi ala Mick McCarthy na-akparịta ụka otu ụbọchị mgbe ọ kpọchara ndị otu egwuregwu ndị otu egwuregwu nke Ireland. Ebe E Si Nweta to Sportsfile na Independent
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Aaron Connolly Childhood Akụkọ tinyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ Irish Football